विश्व कीर्तिमानी गीतकार डा. डीआर उपाध्यायको नयाँ गीत ‘जुनी जुनी’सार्वजनिक • Nepal's Trusted Digital Newspaperविश्व कीर्तिमानी गीतकार डा. डीआर उपाध्यायको नयाँ गीत ‘जुनी जुनी’सार्वजनिक • Nepal's Trusted Digital Newspaper
विश्व कीर्तिमानी गीतकार डा. डीआर उपाध्यायको नयाँ गीत ‘जुनी जुनी’सार्वजनिक
‘काठमाडौँ । विश्व कीर्तिमानी गीतकार डा. डीआर उपाध्यायको नयाँ गीत ‘जुनी जुनी ’ सार्वजनिक गरिएको छ । रोमान्टिक शैलीमा तयार गीतमा संगीत तथा स्वर समेत गीतकार उपाध्यायको रहेकाे छ । गीत गायनमा उपाध्यायलाई गायनमा अनु चौधरीले स्वरमा साथ दिनुभएकाे छ ।
गीतको भिडियोमा गीतकार उपाध्याय र मोडल नम्रता अर्यालको अभिनय देख्न सकिन्छ । रोमान्टिक प्रेमकथाको थिममा भिडियो समेत निर्माण भएको छ । १४ तालहरुमा छायांकन भएको भिडियोका निर्देशन समेत गीतकार उपध्यायले गर्नुभएकाे हाे ।
उत्सव दाहालको छायांकन र साहिल लम्सालको सम्पादन रहेको भिडियो डीआर म्युजिक क्रियशनले आफ्नो युट्युवमार्फत सार्वजनिक गरेकाे हो ।
केही अगाडि ८० विश्व रकेर्ड बनाउनुभएका डा. उपाध्याय अहिले १०८ विश्व रेकर्ड पुर्याउने दौडमा हुनुहुन्छ ।